घरमानै पुगेर सबिता मातालाई मार्ने धम्की दिने युवक को हुन् ? माता प्रहरी चौकीमा पुगीन् (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
घरमानै पुगेर सबिता मातालाई मार्ने धम्की दिने युवक को हुन् ? माता प्रहरी चौकीमा पुगीन् (भिडियो)
यद्यपी माताले आफुले उक्त शंकास्पद युवकको नाम खुलाउन भने चाहिनन् । ति युवकले बाहिर बाट आएको बताइन् । सो अवसरमा उनले आफ्नो दुश्मनी कोहीसँग नभएको तर पत्रकारहरुले आँफुलाई गलत समाचार सार्वजनिक गरेर दु्ख दिइरहेको भन्दै जंगीइन् । पत्रकारहरुले आफ्नो धर्म राम्रोसँग निर्वाह नगरेकाले पत्रकारहरु माथी पनि उनले औँला ठडाइन् । तर उनले तत्कालै आफ्नो कुरा घुमाएर यस विषयमा अहिले नबोलौँ भन्न समेत भ्याइन् ।